Sounds that can't hear and Thoughts that can't see: ညီတော်မောင်မေမြို့မိုးရဲ့တဂ်ပို့စ်
Posted by Yin Sue at 3:31 PM
မေမြို့မိုး March 17, 2012 at 3:55 PM
အစ်ကိုကြီး အားဘူးထင်လို့ အားနာနေတာ.. ရေးပေးတာ ကျေးဇူးနော်ကိုကြီး ..။
ချစ်စံအိမ် March 17, 2012 at 4:31 PM
Snow May March 18, 2012 at 12:15 AM
လာဖတ်သွားတယ်နော်.. သူရေးမှ ကြောက်တောင် လာပြီ. နာ့ဆီလည်း ခဲပျံတုတ်ပျံဆဲသံတွေလာရင် ကြောက်ကြောက်ပဲ.:D
Min Ayeik March 18, 2012 at 2:39 AM
နာ့ဟာနာ အေးအေးဆေးဆေး ယူနေတာကို ကျောင်းပိတ်ရက်ကလေး
အလွမ်းမြို့လေး March 18, 2012 at 3:17 AM
မောင်လေးရေ မကြီးလွမ်းကတော့ လာဖတ်သွားတယ်။ ဘာမှမပြောတတ်လို့ နှုတ်ပိတ်ပြန်သွားခဲ့တယ်။
ကြယ်ပြာ March 18, 2012 at 5:00 AM
လာဖတ်သွားတယ်။ အမြင်တူတာတွေလဲ ရှိ မတူတာတချို့လဲရှိသပေါ့။
jasmine(တောင်ကြီး) March 18, 2012 at 7:13 AM
အောင်အောင် March 18, 2012 at 10:13 AM
နာက ဘယ်ကနေဘယ်လိုရေးရမှာလည်း နာ့ဦးနှောက်တွေ အထက်နှင့်အောက် ပြောင်းပြန်လန်ကုန်ပြီကွ....
ရင်ဆူး March 18, 2012 at 10:18 AM
Z@! March 18, 2012 at 9:12 PM
လာဖတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျ. အကိုရေးထားတာတွေကို သဘောတူလက်ခံကြောင်း လာပြီး ထောက်ခံသွားပါတယ်။ :)
ရာဇာထွေး March 19, 2012 at 9:49 AM
ပို့စ်လေး ဖတ်သွားပါတယ် ညီလေး ဆူးရေ...
ပြီးခဲ့တာလည်း ပြီးခဲ့ပြီမို့ ဘာမှလည်းမပြောချင်တော့ပါဘူး...
ရေပိုင်နက် ကိုသူပိုင်တယ်၊ ကိုယ်ပိုင်တယ် ဆိုတာကို ဘယ်လို
စံနှုန်းတွေနဲ့ စံထားသတ်မှတ်တယ် ဆိုတာလည်းနားမလည်တာမို့
ဒီကိစ္စကို ITLOS ကဆုံးဖြတ်တာ မှန်သလား မှားသလားဆိုတာလည်း
မသိတာအမှန်ပါ... ဒီကိစ္စကို တကယ် နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲံ့ ဥပဒေ
ပညာရှင်တွေ အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ကြမယ် ဆိုတာတော့ မလွဲပါဘူး... ဘာ
လို့လည်းဆိုတော့ သူတို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲ ... ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို
ချစ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူတွေပဲ ... အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ကြမှာပါ...အကို တို့တွေ
ဒီကိစ္စကို ကိုယ်တိုင် ၀င်မလုပ်ကြ ပဲ နဲ့တောင် ကိုယ်ကရှုံးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ
အခုလိုမခံချိ မခံသာ မချင့်မရဲဖြစ် နေရသေးရင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်လုပ်
ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေဆိုရင် အကိုတို့တွေထက်ပိုပြီးခံစားရမှာပါ...အကိုတို့
မမွေးခင် 1974 ခုနှစ်လောက်ကတည်းစပြီး ရေပိုင်နက်အငြင်းပွား ရင်းနှစ်ဖက်
ညှိနှိုင်းလာ တာဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေလို့ 2009 နှစ်လောက်မှာ ITLOS ခုံရုံး
ကိုတင်ပြပြီး ခုံရုံးရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကိုအခုလိုနှစ်ဖက်စလုံးကျေနပ်စွာခံယူခဲ့ကြတာပါ...
ကိုယ်ဖက်က ဆုံးရှုံးတာလည်းရှိတာပေါ့... သူဖက်ကလည်းဆုံးရှုံးတာရှီတာပေါ့...
သို့သော် မြန်မာလူမျိူး မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တော့ ကိုယ် ကပဲနိုင်ချင်ပါ
တယ်... တရားတာ မတရားတာအပ ထားပါ... အခုလိုရှုံးလိုက်ရတဲ့ အတွက်
လည်းခံပြင်းမိပါတယ်... အထက်မှာညီလေး ဆူး ပြောခဲ့သလိုပေါ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
စိန့်မာတင်ကျွန်း(ရှင်မဖြူကျွန်း) လေး ဘင်္ဂလားလက်ထဲပါသွားခဲ့တာတော့သေချာ
ပါတယ်... အရှုံးထဲက အမြတ်ထုတ်ရင် ရခိုင်ကမ်းလွန်က ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်
ငွေ့သိုက် လုပ်ကွက်တွေ ဖြစ်တဲ့ အထက်မှာ ညီလေး ဆူး တင်ပြခဲ့တဲ့ A1 နဲ့ A3
လုပ်ကွက်တွေ အပြင် နှစ်နိုင်ငံရေပိုင်နက်ကို ပိုင်းခြားပေးထာတဲ့ အနီရောင် လိုင်း
အနီးနဲ့ ကပ်လျက် မှာရှီတဲ့ AD7လုပ်ကွက်ဟာလည်း မြန်မာဖက်အခြမ်းမှာ လွတ်
လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပါ လာတာမို့ အရှုံးထဲက အမြတ်လို့ပဲ တွေးလိုက်ပါတယ်... ဒါပေ
မယ့် ရှုံးတာတော့ ရှုံးသွားပါပြီ... ရှုံးရတာကို လက်ခံနိုင်ပေမယ့် ဘာမဟုတ်တဲ့
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ( ဘ ) ကို ရှုံးလိုက်ရတာတော့ ကျား ကိုခွေးကိုက်ခံသလို ရင်နာ
မိတာ အမှန်... အင်းရေးရင်းနဲ့ လူမျိုးရေးတွေပါ ပါလာပြီ...အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ
နဲ့ ပတ်သက်လာရင် အကိုတော့ ဘကုန်း တွေကို တယ်ပြီး ကြည့်မရဘူး ...
အကိုတော့ ညီလေးဆူး ရဲ့ မြင်လေးကို တပ်ဆင့်ထောက်ခံသွားပြီဟေ့......
8Yar March 19, 2012 at 7:24 PM
အစ်ကို့အမြင်လေးဖတ်သွားတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ဒေါသထွက်လို့ ဖဘမှာအော်လိုက်သေးတယ်။ ဘင်္ဂလားက သူတို့အသာရသလို ပြောထားတော့။ မြန်မာရှုံးတယ်လို့ ထင်တာပေါ့။ ဖတ်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးဗျာ။